ကံမမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးသည် သရက်ခရိုင်ရှိ မြို့ အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ပခုက္ကူခရိုင်ရှိ မြို့ အတွက် ကမ္မမြို့ ကို ကြည့်ပါ။
ကိုဩဒိနိတ်: 19°1′N 95°6′E﻿ / ﻿19.017°N 95.100°E﻿ / 19.017; 95.100
သရက်ခရိုင် ကံမမြို့၏ မြင်ကွင်းတရပ်
ကံမမြို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ ကံမမြို့နယ်၏ မြို့နယ်ရုံးစိုက်ရာ ဖြစ်သည်။ သရက်မြို့တောင်ဘက် ၂၃ မိုင်အကွာ ဧရာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်း​တွင် တည်ရှိသည်။ မြို့နယ်၏ အကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်း မိုင် ၅၇၅ ခန့်ရှိ၍ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၁၅၇ ရွာ၊ သူကြီးပိုင် ၅၂ ပိုင်ပါဝင်သည်။ ကံမမြို့ပေါ်ရှိ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၅,၂၀၂ ယောက် ဖြစ်သည်။
ကာမမြို့ကို ကံမမြို့ဟု ရှေးကခေါ်တွင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ကံမ သို့မဟုတ် ကမ္မဟု ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ သက္ကရာဇ် ၅၂၈ ခုနှစ်လောက်တွင် အလောင်းစည်သူမင်းသည် ဖောင်တော်ဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်အတိုင်း စုန်ဆင်းလာရာ၊ မြို့နေရာအနီးတွင် ဖောင်တော် ရပ်တန့်နေသဖြင့် အကြောင်းကို စုံစမ်း၍ ဖောင်တော်အောက်တည့်တည့်ရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ဖော်ယူ ပင့်တင်ပြီးလျှင် ဌပနာကာစေတီတည်သည်။ ထိုစေတီကို ဘုရားပေါ်ဘုရားဟု ဘွဲ့ချီ၍ မြို့အမည်ကိုလည်း ကံထောက်မ၍ ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကို ဖူးတွေ့ရခြင်းကြောင်း ကံမမြို့ဟု သမုတ်ခေါ်တွင်စေသည်ဟု ဆိုလေသည်။ ထိုစေတီမှာ ယခုအခါ ဘုရားပေါ်ဟု တွင်သည်။ ဘုရားဆယ်ယူရန် ရွှေဖျင်ကို ယူဆောင်ဆက်သသော အရပ်ကို ရွှေဖျင်ဆောင်ရွာဟုသမုတ်ရာ ယခုအခါ သပျင်ဆောင်ရွာဟု အမည်တွင်လျက်ရှိသည်။
ကံမမြို့ကို သက္ကရာဇ် ၄၅ဝ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီက မေခဝတီမြို့ဟု ခေါ်တွင်၍ မေခဝတီမြို့စား ဦးဆောင်းသည် ရွှေမြင်မိ (ယခုရွှေမြင်တင်) ဆုတောင်းပြည့်စေတီကို တည်ထားခဲ့သည်ဟု လည်း အဆိုရှိသည်။ ထိုစေတီအနီးရှိ ပေ ၄ဝ ကျော်မြင့်သော ခြင်္သေ့ရုပ် ၂ ခုမှာလည်း ဦးဆောင်း၏ ကောင်းမှုဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
ကံမမြို့မှာ အရောင်းအဝယ် စည်ကားသောမြို့ကလေး ဖြစ်သည်။ ကံမမြို့နယ်တွင် ယခင်က ဗာဂျီးနီးယား ဆေးရွက်ကြီးများစိုက်ပျိုး၍ ဆေးပြင်းလိပ် များကို အကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်သည်။ ဆေးအပြင် ကြက်သွန်၊ ငရုတ်၊ အထည်အလိပ်၊ ဝါး၊ ဖျာများ ထွက်ရှိသေးသည်။ ကံမမြို့နယ်မှထွက်သော ကျွန်းသစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပို့ထုတ်သော ကျွန်းသစ် များ၏ ၁၅ ပုံ ၁ ပုံခန့် ရှိသည်။ ဧရာဝတီမြစ်၏ အနောက်ဘက်ကမ်း တွင်တည်ရှိကာ ရာသီပေါ်သီးနှံများ (ငရုပ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ နှမ်း၊ ပြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ဆန်စပါး) စိုက်ပျိုးခြင်းသည် ကံမမြို့၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မျှင်ဝါးခုတ်ယူ ရောင်းချခြင်း ကိုလဲ အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသေးသည်။ ကံမမြို့နယ် အတွင်းမှ ထွက်ရှိသော မျှင်ဝါးများကို ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းရှိ မြို့ရွာများသို့ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်း မျှောယူသယ်ဆောင်ကာ ရောင်းချကြသည်။ ပွင့်လင်းရာသီများတွင် ကံမမြို့အရှေ့ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးတစ်လျှောက် ဝါးဖောင်များ ဖောင်ဆွဲမော်တော်များ ပြည့်နှက်နေလေ့ရှိသည်။
ကံမမြို့နယ်တွင် ထင်ရှားသော အဆောက်အအုံများမှာ မဒေးဝ ရပ်ကွက်ရှိ မေခဝတီမြို့စားတည် ရွှေမြင်မိဘုရား၊ မြင်ဒင်ကုန်းရှိ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးတည် ရွှေမြင်တင် ဘုရား၊ ကန်ဦးကုန်းရှိ ဘုရားတော် ဘုရား၊ နတ်မီးကုန်းရှိ ဖေါင်တော်ဦးဘုရား၊ မုဋ္ဌောကုန်းရှိ ရွှေမုဋ္ဌောဘုရား စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျောက်ပတောင်းကျေးရွာ ရှင်မတောင် တော်ပေါ်ရှိ ကျိုက်ထီးရိုးပုံတူ ကျိုက်ထီးရွက်ဘုရားသည်လည်း အထူးထင်ရှားသည်။
ကံမမြို့တွင်ထားရှိသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်တုဖွင့်ပွဲသို့ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ၊ ခရိုင်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ၊ ပြည်သူများတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။
ကံမမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန (အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန) ၏ (၇-၇-၇၂)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစအမှတ်၊ ၂၅၈ဖြင့်ရပ်ကွက် (၁၁)ရပ်ကွက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ (၂၈-၈-၇၃) ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်၊ ၅၃၈ (ပြင်ဆင်ချက်)ဖြင့် (၄)ရပ်ကွက် ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းထားသော မြို့နယ်ဖြစ်သည်။
တည်နေရာအကျယ်အဝန်း ကံမမြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင်ရှိပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏တောင်ဘက် အစွန်ဆုံးမြို့ သရက်ခရိုင်အတွင်း တည်ရှိသည်။ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၈-၄၉၊ မှ ၂၀-၁၂၊ အကြား၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၄၉-၄၀၊ မှ ၉၅ - ၁၀၊ အတွင်းကျရောက်ပြီး ဧရိယာအားဖြင့် (၂၈၄၉၇၈)ဧက၊ စတုရန်းမိုင်အားဖြင့် (၄၄၅.၂၈)မိုင် ရှိသည်။ အရှေ့နှင့်အနောက် (၂၉)မိုင်၊ တောင်နှင့်မြောက် (၂၃)မိုင်ရှိသည်။
နယ်နိမိတ် ကံမမြို့နယ်သည် မြောက်ဘက်တွင် သရက်မြို့နယ်၊ ပြရေကျေးရွာနှင့် မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ စပါးတန်းကျေးရွာ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဧရာဝတီမြစ်၊ အောင်လံမြို့နယ်၊ ပြလို့ကျေးရွာ၊ ပြည်မြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ရွာသာယာကျေးရွာ၊ ကျီးပင်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် တောင်ကုတ်မြို့နယ်တို့နှင့် ဆက်စပ်တည်ရှိသည်။
မြေပြင်အခြေအနေ ကံမမြို့နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း တာရှချီချိုင့်ဝှမ်း အတွင်းကျရောက်တည်ရှိနေသည်။ မြေပြင်မှာ အနောက်ဘက်တောင်တန်းဒေသ (ရခိုင်ရိုးမ)၏ လက္ခဏာများနှင့် မြစ်ဝှမ်းမြေနိမ့်ဒေသ လက္ခဏာများရောယှက်လျက်ရှိသည်။ ကံမမြို့နယ်ဧရိယာ၏ ၅ ပုံ ၄ ပုံတွင် တောင်တန်းတောင်ကုန်းများ လှိုင်းတွန့်မျက်နှာပြင်များနှင့် ချိုင့်ဝှမ်းများရှိနေသည်။
ရေဆင်း ဧရာဝတီမြစ်သည် ကံမမြို့နယ်တွင် အဓိကဖြစ်ပြီး ယင်းမြစ်သည် ကံမမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်၊ နယ်နိမိတ်တလျောက် မြောက်မှတောင်သို့ဖြတ်သန်း စီးဆင်းသည်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် ကံမမြို့သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ (၁၃၉.၀၀၄)ပေတွင် တည်ရှိသည်။
ရာသီဥတု ကံမမြို့နယ်၏ ရာသီဥတုမှာ အကူးအပြောင်းရာသီဥတု အမျိုးအစားဖြစ်သည်ပြီး ပျမ်းမျှအမြင့်ဆုံး အပူချိန်မှာ (၂၀.) C နှင့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ (၁၅.) C ဖြစ်သည်။
သဘာဝပေါက်ပင်များ ကံမမြို့နယ်တွင် ကျွန်း၊ စစ်၊ တီ၊ တောင်စကိုင်း၊ ထောက်ကြံ့၊ ထနောင်း၊ ဒဟပ်၊ ဒီးဒူး၊ နှော၊ ပိတောက်၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပျဉ်းမ၊ မျောက်ချော၊ ရှား၊ သစ်ရာ၊ သန်း၊ အင်ကြင်း၊ အင်၊ ယင်းမာနှင့် ဝါးအမျိုးမျိုး ပေါက်ရောက်လျက်ရှိသည်။
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ကံမမြို့နယ်တွင် တောကြောင်၊ မြွေပွေး၊ မြွေဟောက်၊ငန်းတော်ကျား၊ ငန်းစောင်း၊ ငန်းပုပ်၊ လင်းမြွေ၊ စပါးကြီး၊ စပါးအုံးမြွေများရှိသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လက်ရှိအခြေအနေ ကံမမြို့နယ်သည် သဘာဝတောများ ဖုံးလွှမ်းမှုဧကသည် ဒေသအနှံ့ရှိပြီး သစ်ကြီးဝါးကြီးများ ထူထပ်စွာပေါက်ရောက်သော ဒေသဖြစ်သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပညာပေးဟောပြောခြင်း၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များမှကျွန်းအစားထိုးပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊အခြားအဖိုးတန် သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှု ကံမမြို့နယ်တွင် မိုးတွင်းကာလရေကြီးမှုများ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ဒေသခံ ပြည်သူများအား လှုံဆော်ပေးခြင်း၊ပူပြင်းခြောက်သွေ့သည့်ရာသီတွင်လည်း မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးသတိပေးနှိုးဆော် ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာအလိုက်အသံချဲ့စက်ဖြင့် လိုက်လံဆော်ဩပေးလျက်ရှိသည်။ လူဦးရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကံမမြို့နယ်တွင်နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၁။ ကရင် = ၆ ၂။ ချင်း = ၅၃၉၅ ၃။ ဗမာ = ၇၀၁၀၄ ၄။ ရခိုင် = ၂၁ ၅။ ရှမ်း = ၃ မြို့နယ်ချုပ် = ၇၅၅၂၉
အိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေ ကံမမြို့နယ်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ထိ လူဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (က) အိမ်ခြေ/အိမ်ထောင်စု ၁။ မြို့ပေါ် အိမ်ခြေ =၁၃၈၁ အိမ်ထောင်စု= ၁၃၄၀ ၂။ ကျေးရွာ အိမ်ခြေ=၁၉၇၂၃ အိမ်ထောင်စု= ၂၀၄၃၁ မြို့နယ်ချုပ် အိမ်ခြေ= ၂၀၁၀၄ အိမ်ထောင်စု= ၂၁၇၇၁ (ခ) လူဦးရေ ၁။ မြို့ပေါ် အသက်(၁၈)နှစ်အထက် ကျား (၁၇၃၅)၊ မ (၂၁၉၁)၊ ပေါင်း (၃၉၂၆) ၂။ မြို့ပေါ်အသက် (၁၈)နှစ်အောက် ကျား (၅၂၈) ၊ မ (၅၂၈)၊ ပေါင်း (၁၀၅၆) ၃။ ကျေးရွာအသက်(၁၈)နှစ်အထက် ကျား(၂၄၈၃၅)၊ မ (၂၈၀၈၃)၊ ပေါင်း(၅၂၉၁၈) ၄။ ကျေးရွာအသက်(၁၈)နှစ်အောက် ကျား(၈၉၉၄)၊ မ (၈၇၇၁)၊ ပေါင်း (၁၇၇၆၅) ၅။ မြို့နယ်ချုပ် စုစုပေါင်း ကျား (၃၆၀၉၂)၊ မ(၃၉၅၇၃)၊ ပေါင်း(၇၅၆၆၅
အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး(၁)ဦး၊ မြို့နယ်ရုံး(၁)ရုံး၊ ရပ်ကွက်ရုံး(၄)ရုံး နှင့်ကျေးရွာအုပ်စုရုံး(၅၂)ရုံး ကံမ
မြို့နယ်ရှိဌာနဆိုင်ရာများ ၁။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၂။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ၃။ စီမံကိန်း ၄။ မြို့နယ်တရားရုံး ၅။ မြို့နယ်ဥပဒေရုံး ၆။ ပညာရေး ၇။ မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး ၈။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ၉။ လ-ဝ-က ၁၀။ တိ/ မွေး/ကု ၁၁။ လမ်းဦးစီးဌာန ၁၂။ ကျန်းမာရေး ၁၃။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ၁၄။ မြို့နယ်ကော်မရှင် ၁၅။ လယ်ဖွံ့/ဘဏ် ၁၆။ အထူးစုံစမ်းရေးဦးစီးဌာန ၁၇။ မီးသတ်ဦးစီးဌာန ၁၈။ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ၁၉။ ပြန်/ဆက် ၂၀။ သမဝါယမဦးစီးဌာန ၂၁။ လယ်/စီ စာရင်းအင်း ၂၂။ ဆက်သွယ်ရေး တယ်လီဖုန်း ၂၃။ ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက် ၂၄။ သစ်တော ၂၅။ စိမ်းစို ၂၆။ မြန်မာ့လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း ၂၇။ အား/ကာ ၂၈။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
နိုင်ငံရေးပါတီများ ၁။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၂။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၃။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ၄။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ ၅။ အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီ ၆။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ၇။ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၈။ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ
ရွေးချယ်ခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ၁။ ဦးစိန်ဟန် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်) NLD ပါတီ ၂။ ဒေါ်သန်းသန်းအေး (အမျိုးသာလွှတ်တော်) NLD ပါတီ ၃။ ဦးဇော်ဝင်း (တိုင်းဒေသကြီး -၁) NLD ပါတီ ၄။ ဦးမြင့်အောင်(တိုင်းဒေသကြီး -၂) NLD ပါတီ ၅။ ဦးလှထွန်း(ချင်းတိုင်းရင်းသား) NLD ပါတီ
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ကံမမြို့နယ်သည် သရက်ခရိုင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတည်ရှိပြီး စီးပွားရေးအရ စိုက်ပျိုးရေး ကိုသာ အဓိကဆောင်ရွက်သော မြို့နယ်ဖြစ်သည်။ အဓိက ထွက်ကုန်မှာ စပါး၊ မြေပဲ၊နှမ်းနှင့်ပဲမျိုးစုံတို့ဖြစ် ပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့သို့ အများဆုံး တင်ပို့ရောင်းချပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်းမြို့၊ သရက်ခရိုင် သရက်မြို့နှင့် မင်းတုန်းမြို့သို့လည်း ဒေသထွက် ဆန်စပါးများတင်ပို့ရောင်းချပါသည်။
စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦများ ကုမ္ပဏီပွဲရုံများ၊ ဈေးနှင့်ကုန်တိုက်များ ကံမမြို့နယ်တွင် ကုမ္ပဏီ မရှိပါ။
ပွဲရုံများနှင့်တည်နေရာ ၁။ ဦးခိုင်ကိုဝင်း (အမှတ်-၂ ရပ်ကွက်) ၂။ ဦးခင်မောင်မြင့် (အမှတ်-၄ ရပ်ကွက်)
ဈေးများနှင့်တည်နေရာ မြို့မဈေး၊ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်
ကုန်တိုက်များနှင့်တည်နေရာ ကံမမြို့နယ်တွင် ကုန်တိုက်များ မရှိပါ။
ဘဏ်များ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
၄။ ဖုန်း/ ဖုန်းပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်(၆)ဆိုင်
၅။ စာအုပ်ဆိုင် (၁)ဆိုင်
၆။ ဆေးဆိုင် (၆)ဆိုင်
၇။ စားသောက်ဆိုင် (၁၄)ဆိုင်
၈။ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် (၄)ဆိုင်
၉။ ကုန်မာဆိုင် (၅၀)ဆိုင်
၁၁။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဆိုင် (၅)ဆိုင်
၁၂။ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင် (၅၈)ဆိုင်
၁၃။ ဆန်ဆိုင် (၂)ဆိုင်
၁၄။ အဝတ်အထည်ဆိုင် (၄)ဆိုင်
၁၅။ နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင် ( -)
၁။ အသားတင်စိုက်ပျိုးမြေ (၅၇၆၈၇) ဧက
(က) လယ်မြေ         (၂၁၀၈၅) ဧက
( ခ)  ယာမြေ            (၂၆၂၅၁) ဧက
( ဂ)  ကိုင်း/ကျွန်းမြေ (၁၀၂၂၁) ဧက
(ဃ) ဥယျာဉ်မြေ       ( ၁၃၀) ဧက
၂။ ကြိုးဝိုင်း / ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောမြေ ( ၇၂၀၉၄) ဧက
၃။ တောရိုင်းမြေ  (၁၁၀၁၄၄) ဧက
၄။ မြေရိုင်း (၁၉၅၅၂) ဧက
၅။ စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုနိုင်သောမြေ ( ၂၅၅၀၁) ဧက
မဒေးဆည် မြေသားတမံ အကျိုးပြု ဧက (၂၆၅၄) ဧက
၁။ ပေါက်မဆည် (၂၅၀)ဧက
၂။ သားရဲတွင်းဆည်                                (၁၀၀)ဧက
၃။ တောင်တော်ဆည်                              (၄၃၀) ဧက
၄။ ငွေလေးဆည်                                     (၂၅၀) ဧက
၅။ ရုက္ခစိုးဆည်                                       (၆၄) ဧက
၆။ လဲပင်ဆည်                                         (၅၄) ဧက
၇။ တင်းတော်ဆည်                                   (၄၈) ဧက
၈။ သပြင်ဆောင်ဆည်                               (၂၅၀)ဧက
၉။ ထောက်ကြံ့ကွင်းဆည်                           (၅၀) ဧက
၁၀။ အလပ်လယ်ရေလွှဲဆည်                      (၆၀)ဧက
၁၁။ ညောင်ခုံဆည်                                    (၁၄၁)ဧက
၁၂။ အိုင်မဆည်                                         (၁၇၂)ဧက
၁၃။ ကရင်စုမြောင်းဆည်                             (၁၅)ဧက
၁၄။ ညောင်ကိုင်းရေလွှဲဆည်                       (၁၂၅) ဧက
၁၅။ ဝါးတူးတောင်ဆည်                             (၆၄၀) ဧက
၁၆။ မိုးကောင်းဆည်                                  (၃၀၀)ဧက
ကံမမြို့နယ်   မဒေး သစ်တောကြိုးဝိုင်းသည်   (၂၈၉၉၆)   ဧက  ရှိပြီး   ကျွန်း၊   ပျဉ်ကတိုး၊ ဘင်္ဂတို့ ပေါက်ရောက်ပြီး   မဒေးတိုးချဲ့ ကြိုးဝိုင်း   (၁၆၃၇၂)   ဧက တွင်   နှော၊  ဒီးဒူး၊ ချဉ်ယုတ်၊ လိန်တုန်းကြိုးဝိုင်း
(၄၆၈၁) ဧက တွင် နဘဲ၊ ထောက်ကြန့်၊ လိန်တုန်းတိုးချဲ့ ကြိုးဝိုင်းတွင် (၈၁၅၈) ဧက တွင် ဖန်ခါး၊ သစ်ရာ၊ ရှား၊ အင်ကြင်း၊ မုန်းဒါးကြိုးဝိုင်း (၇၄၅၇) ဧကတွင် အင်ကြင်း၊ ငဝက်ကြိုးဝိုင်း (၂၉၃၀) ဧကတွင် မျှင်ဝါး၊ သိုက်ဝါး၊ တင်းဝါး၊ ကြက်သောင်းဝါး၊ ကရင်ဝါးတို့ပေါက်ရောက်ပါသည်။
ဓာတ်အားခွဲရုံ အမည်နှင့်ဖြန့်ဖြူးသည့် ဓာတ်အား(KW) စီဓာတ်အားခွဲရုံ (3978.6 KW)
၂။ ကံမ -ကျော်စွာ
၁။ ကံမ - သရက် - မင်းလှ -  မကွေး
၂။ ကံမ - ပြည်
၃။ သရက်- ကံမ - ရန်ကုန်
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် အဓိက သီးနှံ (၁၀)မျိုးမှာ စပါး၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊နေကြာ၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ဝါ၊ ကြံ၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်းတို့ ဖြစ်သည်။
နှစ်ရှည်သီးနှံစိုက်ပျိုးမှု ဧက ကံမမြို့တွင် လျှော်ဖြူ (၆၃)ဧက စိုက်ပျိုးပြီး အခြား ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများစိုက်ပျိုးမှု မရှိပါ။
စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ ကံမမြို့နယ်တွင်စက်မှုဇုန် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ မရှိပါ။
တံတားများ ပေ (၁၈၀)အထက်တံတားများ
၁။ ရေနံ့သာတံတား (၇၀၀)ပေ ဘေလီတံတား
၂။ ကဒူးပြင်တံတား(၃၀၀)ပေ ကွန်ကရစ်တံတား
၃။ သပြေကိုင်းတံတား(၂၂၀)ပေ ကွန်ကရစ်တံတား
ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုခန်း ကံမမြို့တွင် ရွှေတိမ်လွှာအမည်နှင့် တည်းခိုခန်း (၁)ခုရှိသည်။
ပညာရေးကဏ္ဍ အခြေခံပညာ (၁) အ-ထ-က ကျောင်းများ
စဉ်       ကျောင်းအမည်                   တည်နေရာ
၁။ အ-ထ-က (ကံမ) အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် ၂။ အ-ထ-က (ရနေံ့သာ) ရနေံ့သာရှာ ၃။ အ-ထ-က (ကြို့ပင်) ကြို့ပင်ရွာ
၄။ အ-ထ-က (အင်းဘဲ) အင်းဘဲရွာ ၅။ အ-ထ-က (ကျောက်စောင်း) ကျောက်စောင်းရွာ (၂) အ-ထ-က ကျောင်း (ခွဲ)များ
စဉ်       ကျောင်းအမည်                      တည်နေရာ
၁။ အ-ထ-က(ခွဲ)စစ္စရံ စစ္စရံကျေးရွာ
၂။ အ-ထ-က(ခွဲ)ကျောက်မဲ ကျောက်မဲကျေးရွာ
၃။ အ-ထ-က(ခွဲ)ခြောက်ပင် ခြောက်ပင်ကျေးရွာ
၄။ အ-ထ-က(ခွဲ)ပုထိုး ပုထိုးကျေးရွာ
(၃) အ-လ-က ကျောင်းများ
၁။  အ-လ-က (ဓမ္မသော်) ဓမ္မသော်ကျေးရွာ
၂။ အ-လ-က (လိန်တုန်း) လိန်တုန်းကျေးရွာ
၃။ အ-လ-က (ပြောင်ကျ) ပြောင်ကျကျေးရွာ
၄။ အ-လ-က (အင်းကြီးကုန်း) အင်းကြီးကုန်းကျေးရွာ
(၄) အ-လ-က ကျောင်း(ခွဲ)များ
၁။ အ-လ-က (ခွဲ) မြဝတီ မြဝတီကျေးရွာ
၂။  အ-လ-က (ခွဲ) ပေပင် ပေပင်ကျေးရွာ
၃။ အ-လ-က (ခွဲ)ထောက်မ ထောက်မကျေးရွာ
၄။ အ-လ-က (ခွဲ)အလယ်ချောင်း အလယ်ချောင်းကျေးရွာ
၅။ အ-လ-က (ခွဲ)အင်ဘက်တော အင်ဘက်တောကျေးရွာ
၆။ အ-လ-က (ခွဲ)မုန်းဒါး မုန်းဒါးကျေးရွာ
၇။ အ-လ-က (ခွဲ)သာဇီ သာဇီကျေးရွာ
(၅) မူလတန်းလွန်ကျောင်း (၁၁)ကျောင်း ရှိသည်။
အ-မ-က ကျောင်း  (၉၇)  ကျောင်း နှင့် မူလတန်းကြိုကျောင်း  (၄)ကျောင်း ရှိသည်။ ဘုန်းတော်
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ဆေးရုံများ စဉ် ဆေးရုံအမည် တည်နေရာ ၁။ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ကံမမြို့ ၂။ ရေနံ့သာတိုက်နယ် ရေနံ့သာကျေးရွာ ၃။ ကြို့ပင်တိုက်နယ် ကြို့ပင်ကျေးရွာ
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ စဉ် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲအမည် ၁။ ရေနံ့သာတိုက်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၂။ ခြောက်ပင်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၃။ ကျွန်းတောကုန်းကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၄။ တောင်တီးကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၅။ ကျောက်စောင်းကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၆။ အင်ဘက်တောကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၇။ တောင်မြင့်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၈။ အင်းကြီးကုန်းကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၉။ လင်းကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၀။ နတ်မီးတောက်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၁။ အင်းဘဲကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၂။ မင်းပြင်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၃။ ဓမ္မသော်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၄။ ဂုန်းသောင်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၅။ ထန်းလေးပင်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၆။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၇။ စစ္စရံကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၈။ ဝဲကြီးကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၉။ ညောင်ကိုင်းကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၂၀။ သစ်မယ်ဇီကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၂၁။ ကိုင်းဒေါင့်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၂၂။ စပယ်ခြုံကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၂၃။ ကြို့ပင်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၂၄။ ပျဉ်ထောင်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၂၅။ ထန်းကောက်ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၂၆။ သာဇီကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၂၇။ ကျောက်မဲကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
ဒေသတွင်းအများဆုံးဖြစ်တတ်သောရောဂါများ ငှက်ဖျား၊ ဝမ်းလျှော၊ တီဘီ၊ ဝမ်းကိုက်၊ အသည်းရောင်၊
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဗုဒ္ဓဘာသာဆို်ငရာ သာသနိက အဆောက်အအုံများ ကံမမြို့နယ်တွင် ဘုရား(၃၃)ဆူ၊ စေတီ (၂၅၈)ဆူ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁၅၉)ကျောင်းရှိသည်။ ထင်ရှားသည့် ဘုရားစေတီပုထိုးများ စဉ် ဘုရားစေတီပုထိုးအမည် တည်နေရာ ၁။ ဘုရားပေါ်စေတီ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၂။ သင်္ကန်းနက်ဘုရား အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၃။ ကျိုက်ထီးရွက်ဘုရား ကျောက်ပဒေါင်းကျေးရွာ ၄။ ရတနာမာန်အောင်ငါးထပ်ကြီးဘုရား အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၅။ ရွှေစည်းခုံဘုရား အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၇။ ရွှေပုလ္လင်တောင်ဘုရား(အမှတ်-၄- ရပ်ကွက်) ၈။ ကန်လယ်ဘုရား(အမှတ်-၄- ရပ်ကွက်) ၉။ သက်တော်ရှည်သက်တော်ရဘုရား(အမှတ်-၄- ရပ်ကွက်) ၁၀။ ရွှေနန်းပိုင်ဘုရား(အမှတ်-၁ -ရပ်ကွက်) ၁၁။ ခရုတောက်ဘုရား(အမှတ်-၁-ရပ်ကွက်) ၁၂။ ရွှေစေတီဘုရား(အမှတ်-၂- ရပ်ကွက်) ၁၃။ ရွှေဂူကြီးဘုရား(အမှတ်-၁ -ရပ်ကွက်) ၁၄။ ဂူကိုးပေါက်ဘုရား(ဂေါ်ပင်တောင်ကျေးရွာ)
အခြားဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ ကံမမြို့နယ်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ (ဗလီ) (၁)ကျောင်းသာ ရှိသည်။ ခရစ်ယန်ချာခ်ျကျောင်းမရှိ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ။ အတွဲ-၂။ နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန။ မေ ၂၀၁၅။ pp. ၅၂။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကံမမြို့&oldid=738942" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၆:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။